U LIVE - ingxoxo yamahhala engahleliwe namantombazane
Uphila - Live roulette wengxoxo bese usakaza
Kuthatha isigijimi esisodwa ekuxoxweni ukuze uhambe kusuka kubantu abangabazi ngokuphelele ukuze usondelane nabangani noma abathandi. Lesi kwakuyisiqubulo sethu lapho sakha u-LIVE - futhi kusekhona nanamuhla! Xoxa nabantu abavela emhlabeni wonke, yenza abangane abasha, thola uthando lwakho. Landa u-LIVE wengxoxo ku-Google Play noma uqalise uhlelo lokusebenza kusiphequluli sakho okwamanje!
Izici eziyinhloko zikhululekile
Thumela imilayezo, xoxa nanoma ubani ongathanda emakamelweni omphakathi, yenza abangani, qalisa ukusakaza kwakho bukhoma: konke lokhu kukhululekile ngokuphelele.
Siyaziqhenya ukusebenza komkhiqizo ophezulu
Sithuthukisa u-U LIVE ingxoxo nsuku zonke futhi ufisa ukwenza kube usizo nakakhulu. Siyazisa kakhulu impendulo yakho. Sicela usazise uma kukhona okungalungile nge-roulette yethu yokuxoxa ebukhoma. Imicabango yakho kanye neziphakamiso zamukelekile ngaso sonke isikhathi. Masenze u-LIVE ube ngcono ndawonye!
U-LIVE uyiselula-yokuqala futhi i-cross-platform
Sithanda ukukusiza ukuthi uhlale umakhalekhukhwini ezweni lokuqala. Senze ingxoxo yethu ebukhoma etholakalayo ku-Android, iwebhu newebhu yeselula. Jabulela i-widescreen kwikhompyutha yakho noma i-PC uma usendaweni. Ngaphandle? Landa uhlelo lokusebenza lamaphilisi kanye nama-smartphone ukuze uhlale uxhumane futhi uxoxe ekuhambeni.
Sinezimathani zamaphakethe ezitika futhi sidlala amakhadi angakusiza ukuba uthuthukise ukuxhumana kwakho nokusiza ukuveza imizwelo. Amazwana ahlakaniphile ahambisana nama-funny stickers angasiza abantu abangabazi ukuthi baqede iqhwa bese bazana.
Siyakhathalela ngokuphepha kwakho
Abazimele bazingela abahlukumezi nabahlukunyezwa ekuxoxweni 24/7. Ayikho inkohliso noma i-blackmailing evunyelwe lapha. Ungasisiza futhi ukuvimbela noma yikuphi ukuziphatha okungalungile ngokubika konke okutholayo okusolisayo. Ithimba lethu lizocubungula imibiko yakho ngesikhathi esifanele.
Uxoxe LIVE uyenembile futhi kulula ukuyisebenzisa
Awudingi ukuqinisekisa i-akhawunti yakho ukuba ujabule engxoxweni ebukhoma. Ayikho inombolo yocingo noma ama-akhawunti omphakathi okudingeka ukuba angene ngemvume. Senza futhi abasebenzisi bethu bahlale bengaziwa uma nje befuna.
Qalisa ikhulogi yethu yengxoxo ebukhoma futhi uzobona uhlu lokusakaza okubukhoma phakathi kwesikrini. Ungahlala lapha uma nje ufuna futhi upheqa ukusakaza okubukhoma noma sebenzisa ukusesha ukuthola umsebenzisi othile. Thumela umyalezo wangasese noma uqale ingxoxo yevidiyo yangasese uma uthola othile okhethekile.
Sanciphise izidingo ezincane zokuxhumeka futhi manje ungajoyina u-LIVE kusuka kunoma yikuphi, kungakhathaliseki ukuthi yiliphi izinga le-intanethi. Manje udinga kuphela ukuxhumana oku-3G ukuze uxoxe nomhlaba.